ဧရာဝတီ| January 22, 2013 | Hits:3,508
| | နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်တွင် ၂ ရက်ဆက်တိုက် ပြောကြားသွားသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းများမှာ မြန်မာပြည်၏ အနာဂတ်စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ အတွက် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် ကောင်းလှသော်လည်း ယင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစိုးရ ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရား၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုမူ သံသယရှိသည်။
လူလေး January 22, 2013 - 9:37 pm ဟုတ်ပါဗျာ
Reply Mr Kian January 23, 2013 - 12:00 pm KIO/KIA are defenders of Kachin Peoples and Kachin Land from Intruders and KIO/KIA also fight for Democracy , Rights of Ethnics/Citizens , then to gain PEACEFULLY Country, United States of Burma Federation.
Reply swe htwe January 22, 2013 - 11:50 pm It isagood message.
Reply Linyone January 23, 2013 - 2:08 am The problem is the the lack of authority. President is losing trust from the citizens. His words are empty words. Army does not care what he says. Army does not obey his words. If he were command in chief asapresident, it would beadifferent story. Now, Thein Sein is just an idiot president who has no authority to run the nation. He isalaughing matter to the world.
Reply ကိုရဲ January 23, 2013 - 9:57 am အယ်ဒီတာ၏ရေးသားချက်များသဘာဝကျပါသည်။စာဖတ်သူ၏အမြင်ကိုလည်းတင်ပြချင်ပါ သည်။အဓိကပြောလိုသည်မှာKIA အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။KIAသည်နောင်နှစ်ပေါင်း၁၀၀ ကြာသည့်တိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။မဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းများကိုပြနေပါလိမ့် မည်။KIA ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကိုကိုယ်စားပြုနေသည်မြင်နေလျှင်မှားပါ လိမ့်မည်။ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းတို့ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းတို့လဲ ကချင်တွေဖြစ်ပါသည်။ ကချင်အားလုံးက အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေသည်မဟုတ်ပါ။ သည်အချက်ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိကြစေချင်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်လူမျိုးတစ်မျိုးထဲနေသည် မဟုတ်ပါ။ဗမာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားစုံ နေထိုင်ကြပါသည်။KIA ဘာကြောင့်ငြိမ်း ချမ်း ရေးယူမည်မဟုတ်ဟုပြောရခြင်းမှာ လူတော်တော်များများသိထားကြသည်မှာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အရမ်းချမ်းသာသည်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ထက်အဆပေါင်း များစွာ ချမ်းသာနေသူများမှာKIA ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အချမ်းသာအဖွဲ့အစည်းသည်KIA ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရမတိုင်ခင်နှင့်စစ်အစိုးရခေတ် တစ် လျှောက်လုံး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စုဆောင်းလာပြီး အင်အားကြီးမားသောလက်နက်ကိုင် တပ်များတည်ထောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင် လက်မထောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားမြင်နေကြသောမြန်မာပြည်သားတို့အမြင် တွင် အစိုးရကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ကိုလည်းကောင်းအပြစ်မြင်နေပါလိမ့်မည်။ တဖက် သတ်တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့သဘောမျိုးပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဤအမြင်များလုံးဝမှားနေပါသည်။ မြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေမှန်ကို တိတိကျကျသိအောင်လေ့လာမည်ဆိုလျှင် KIA တို့၏ဆိုးရွားလွန်းသောလုပ်ရပ်များကို သည်ထက်မက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိလာပါလိမ့်မည်။ ကချင်ပြည်နယ်အကျိုးနဲ့သန်း၆၀ ကျော်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင် KiA သည် KNU ကဲ့သို့ပွင့်လင်းစွာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ KIA လူတစ်စု၏အတ္တ ကြီးမားလွန်းသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကိစ္စများ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှင်းလင်းမြင်သာသောအချက်ကို ပြောပြရပါလျှင် လူတိုင်းသည်ဘ၀တစ်ခုကို စိတ်တိုင်းကျဖြတ်သန်းနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။မကျေနပ်ချက် ရှိတိုင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်တွေ၊မြေပြန့်အနှံ့အပြားမှာ ဗမာတွေ၊မြိတ်ကော့သောင်းဘက်မှာထားဝယ်တွေအားလုံး အားလုံး လက်နက်ကိုင်ဖြေရှင်းနေကြမယ်ဆိုရင် မပြီးဆုံးနိုင်သောစစ်ပွဲတွေစဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်KIA သည် နောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သည့်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သမ္မတ ဖြစ်သည့်တိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးယူမည်မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
Reply redjack January 23, 2013 - 1:51 pm the whole burma also not only burmese . Remember ! you know what i mean Right! you are looking at your side only
Reply မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:51 pm ကိုရဲ ခင်ဗျား မှန်သည် ထင်လျှင် ပင်လုံ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ဆန်းကို ပါ ရဲရဲကြီးဆဲလိုက်ပါလားဗျာ။
Reply kumudra January 23, 2013 - 4:52 pm How many percentage of Kachin people want KIA as their government?
Reply chilay January 24, 2013 - 8:06 am 100% support editor’s wise article.
Reply minko January 27, 2013 - 6:51 pm ကေအိုင်အေ က စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေထက် ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဘာကိုထောက်ဆပြီးပြောတာလဲ-စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ -သူတို့ သားသမီးတွေ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှူက ဘယ်လောက်ရှိသလဲ-